Labozia fitsingerenan'ny andro nahaterahana | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny iray amin'ireo zavatra sarotra hinoantsika indrindra amin'ny maha-Kristiana dia ny namelany ny fahotantsika rehetra Andriamanitra. Fantatsika fa marina izany amin'ny teôlôjia, fa rehefa misy toe-javatra azo ampiharina isan'andro, dia mihetsika toa tsy izy. Mirona hanao zavatra mitovy amin'ny ataontsika isika rehefa mamela heloka toa antsika rehefa mitsoka labozia. Rehefa manandrana mamoaka azy ireo isika, dia mijanona hatrany ireo labozia na inona na inona ezaka ataontsika.
Ireo labozia ireo dia fanehoana tsara ny fomba itadiavantsika ny fahotantsika sy ny hadisoan'ny hafa, kanefa miseho hatrany amin'ny fiainana vaovao izy ireo. Saingy tsy izany no fiasan'ny famelana heloka. Rehefa mibebaka amin'ny fahotantsika isika dia mamela heloka Andriamanitra ary manadino izany mandrakizay. Tsy misy sazy fanampiny, tsy misy fifampiraharahana, tsy misy lolom-po miandry ny didim-pitsarana hafa.
Ny famelana heloka tanteraka sy tsy misy famandrihana dia mifanohitra amin'ny toetrantsika. Azoko antoka fa ho tadidinao ny fifanakalozan-kevitra teo amin'i Jesosy sy ny mpianany momba ny hametrahantsika matetika ny famelana heloka ny olona iray manota amintsika: «Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe: Tompoko, impiry moa aho no manana ny rahalahiko, manota amiko, mamela? Ampy impito ve? Hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao fa tsy impito, fa impito amby fito-polo " (Matio 18,21: 22).
Sarotra ny mahatakatra sy mahatakatra io haavon'ny famelan-keloka io. Tsy afaka manao an'io isika, koa sarotra amintsika ny mahatakatra fa mahay manao izany Andriamanitra. Adinontsika matetika fa tsy maharitra vetivety ny famelany ny helony. Mino isika fa na dia milaza aza Andriamanitra fa nesoriny ny fahotantsika, dia tena miandry ny hanafay antsika Izy raha tsy mahafeno ny feniny isika.
Andriamanitra tsy mihevitra anao ho mpanota. Mahita anao amin'ny tena toetranao Izy - olona marina, voadio amin'ny heloka rehetra, novidin'i Jesosy sy navotany. Tadidinao izay nolazain'i Jaona Batista momba an'i Jesosy? "Indreo ny Zanak'ondrin'Andriamanitry ny sorona, Izay manaisotra ny ota amin'izao tontolo izao!" (Jaona 1,29 fandikana vaovao nataon'i Geneva). Tsy manilika vonjimaika izy na manafina fahotana fotsiny. Amin'ny maha Zanak'ondrin'Andriamanitra azy, dia maty Jesosy fa tsy ianao, ka nandoa ny fahotanao rehetra. "Fa aza manisy soa ary mifankatiava ary mifamela heloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'i Kristy" (Efesiana 4,32).
Mamela tanteraka Andriamanitra ary tiany ny hamelanao ny helok'ireo izay, toa anao, mbola tsy tonga lafatra. Raha mangataka famelan-keloka avy amin'Andriamanitra isika dia namela ny helony ianao 2000 taona lasa izay!